Asehoy tsirairay ny horonantsary maromaro - Easy Multi Display
Noforonina On Aprily 30, 2021
Mazava ho azy fa afaka mampiseho horonan-tsary iray, roa, telo na folo misesy miaraka amin'ny Easy Multi Display ianao! Misy fomba roa samy hafa hanaovana an'io. Andao hojerentsika ny fomba hanaovana azy!
Te hampiseho horonan-tsary ao anaty iray amin'ireo lahatahiry ve ianao? Avy eo amin'ny "haino aman-jery"tsindrio"lahatahiry". Ny horonan-tsarinao dia hilalao tsirairay ary raha vantany vao nilalao ny horonan-tsary rehetra dia hilalao indray ilay horonantsary voalohany.
Easy menu Multi Folder fampisehoana
Ny fomba faharoa dia hahafahanao mampiseho horonan-tsary maromaro mifandimby mampiasa serivisy mivantana toy ny YouTube, Vimeo or Dailymotion. Toy ny tamin'ny fomba voalohany, dia hifandimby ny horonan-tsarinao ary rehefa vita ny horonan-tsary rehetra dia hilalao indray ilay horonantsary voalohany.
Mampisehoa horonan-tsary marobe ao amin'ny Easy Multi Display
Ny vahaolana Audiovisual dia afaka manatsara ny fiarovana ny besinimaro mihoatra ny ivon-toeran'ny baiko
Sarimihetsika fampirantiana horonantsary tsara indrindra nataon'i 3X3 55inch 3.5mm Bezel LG Video Wall
LED Digital Signage ho an'ny fivarotanao Melbourne